Aadaa Oromoo: Gabbaranii fuudhuun kabaja dubartii agarsiisaa? - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Faya Oromia Art
Aadaan fuudhaafi heerumaa Oromoo keessatti inni fuudhu maatii ishee heerumtuuf kennaa dhiyeessuubaratamaadha. Kennaan kun bakka tokko tokkotti 'gabbara', bakka kaanitti ammoo 'gonfaa' jedhamuun beekama.
Warri durii maaliif abbaa warraa maqaan hin waaman?
Ogeettii uffannaa guyyaa ayyaanaa gara uffata guyyuutti geeddaraa jirtu
Bara 2013 kan fuudhan Obbo Abdiisaan, "Gatii gabbaraa qarshii 95,000fi bullukkoo 35 maatii haadha warraa kootiif kenneera," jedha. [Abdiisaan maqaa isaanii isa sirrii miti].
Fuudhaaf gabbara dhiyeessuun kun miira waldorgommii hawwaasa keessatti uumaa waan deemuuf yeroo irraa gara yerootti qaala'aa deema jedhu namoonni gatii gabbaraa cimaa deemuu isaa morman.
Obbo Badhaasoonis baasii gabbaraaf baase guddaa ta'uu dubbata. [Badhaasoon maqaa isaa isa dhugaa miti].
"Kennan gabbaraa kun akka dargageeyyiin fuudha barbaadan tokko tokko fedhii dhaban godhaa jira. Maatiin intala heerumtuu gabbaraaf humna keenyaa ol akka kenninu nu gaafatu."
Keessumaa ammoo gurbaan fuudhu nama biyyaa alaatii dhufe (diyaasporaa) yoo ta'e kennan gaafatamus ni jabaata, jedha dargagoon Abdurazaaq.
Sabaaba kanarrra kan ka'een namoonni gabbarri akka hafu barbaadaniis jiru.
Dammaa Sheyifuddin namni fuudhu tokko gabbara maatiifi firoota dubara fuudhuuf kennuun aadaa bareedaa waan ta'eef itti fufuu qaba jetti.
"Kun aadaa abboonnifi haawwonni keenya asiin gahan waan ta'eef nu biratti kufuu hin qabu."
Kun yeroo ta'u ammoo jetti Dammaan, aadaa duraniitiin osoo ta'ee gaariidha. Amma wanni aadaa balleessa jiru namoota biyya alaatii dhufanii gabbaraaf mallaqa gudda baasiniidha.
Maatiinis ammoo diyaaspora waan ta'eef qofa intala isaanii heerumsiisu hin qabani; gabbarallee akka malee eeguu hin qaban jechuun haala madaalawaa ta'een ta'uu akka qabu ibsiti Dammaan.
Akka Dammaan jettutti gabbarri dirqamaan ta'ee kan qormaatarra nama buusu ta'uu hin malu. Gaarii kan ta'u kan giidoo ilma fuudhuu ilaalcha keessa galche yoo ta'edha.
"Dirqama gabbaruu qabda kan jedhamus hafu qaba. Yoo diyaasporaan mallaqa guddaan gabbare hiyyeessi hoo maal haa ta'u?"
Wanti guddaan yaadniifi ilaalchi gabbaraa kabaja intala heerumtuufi maatiifi firootasheef akka ibsuutti waan ilaalamuuf hanga isaa caalaa yaada isaatu ergaa qaba waan ta'eef aadaa jajjabeeffamuu qabudha jetti Dammaan.
Ibsiituu Bayaann ammoo gama isheetiin: "Akka intala Arsii tokkootti aadaa itti boonudha. Gabbarri kabaja intalaa qofa osoo hin taane kan waarraa, ardaafi gosaatillee," jetti.
Dargaggeessi fuudhuuf qophaa'e gabbaraaf haadhaafi abbaaf uffata, akkasumas obboleessa hangafaaf ammoo raadatu kennama jedhu beektuun aadaa Aaddee Zaaraa Duubee.
Yeroo intalli manaa baatuu obboleessi hangafaa balbalarraa dhaabbatee Raada qaraxa fudhata. Dargaggeessi fuudhu kun ammoo "Raadni qaraxii siif haa hortu," jedhee eebbisa.
Obboleessis deebi'see "intalli kee ilmaafi intala siif haa hortu"jedhe eebbisa. Ega obboleessi raada qaraxa fudhatee booda intalli sun heerumuuf qophiidha jechuudha.
Sabaaboota gabbarri yeroo gara garaatti (yeroo cidhaa dura ykn booda) ta'uuf:
yoo dargageessi fuudhu sun yeroo sanitti humna ittin gabbaru kan hin qabne yoo ta'e
yoo intalli sun fedha isheetiin yookiin hayyama maatiin ala kan heerumte yoo ta'e
yoo dargageessi intala butiin kan fuudhe yoo ta'edha.
Yeroo tokko tokko gurba yeroo fuudhanitti dhiyeessuuf humna hin qabu yoo ta'e bubbulee gabbaruu akka danda'u carraan ni jiraata. Turtiin kunis ji'oota hamma waggoota hedduutti ta'uu danda'a.
Obbo Gammadaa Waariyoo haadha warraa isaani bara 1991 kan fuudhan ta'uus garuu gabbara kan kennaan waggoota 19 turanii erga ijoollee horataanii boodadha.
Aadaa Oromoo: 'Geerar geera naan jedhu, Geerarii maal na gorsuu'
Seenaan huccuudhaanis ni dubbatama: 'Kan Seenaa Kiloozing'